जाजरकोट घटनाबारे महानायकले भने नवराज विकको हत्याले मलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनायो, असमानता किन? भन्दै भिडियो आयो ! – Complete Nepali News Portal
जाजरकोट घटनाबारे महानायकले भने नवराज विकको हत्याले मलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनायो, असमानता किन? भन्दै भिडियो आयो !
त्यस्तै यस घटनाबारे महानायकले भने नवराज विकको हत्याले मलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनायो,असमानता किन? किन भन्दै आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सार्बजनिक गरेका छन् हेरौ भिडियो :